Ulwimi Afrikaans አማርኛ العربية অসমীয়া Azərbaycanca Башҡортса Беларуская Български বাংলা Bosanski Català Corsu Čeština Cymraeg Dansk Deutsch Ελληνικά English Español Eesti Euskara فارسی Suomi Føroyskt Français Frysk Gaeilge Gàidhlig Galego ગુજરાતી Hausa עברית हिन्दी Hrvatski Kreyòl Ayisyen Magyar Հայերեն Indonesia Asụsụ Igbo Íslenska Italiano 日本語 Basa Jawa ქართული Қазақша ភាសាខ្មែរ ಕನ್ನಡ 한글 Kurdî Кыргызча Lëtzebuergesch ພາສາລາວ Lietuvių Latviešu Malagasy Māori Македонски മലയാളം Mongɣol kele मराठी Bahasa Melayu Malti မြန်မာစာ नेपाली Nederlands Norsk Chinyanja ଓଡ଼ିଆ ਪੰਜਾਬੀ Polski پښتو Português Qhichwa Română Русский Ikinyarwanda سنڌي සිංහල Slovenčina Slovenščina Sāmoa chiShona Af-Soomaali Shqip Српски Sesotho Basa Sunda Svenska Kiswahili தமிழ் తెలుగు Тоҷикӣ ภาษาไทย Türkmençe Filipino Türkçe Татарча ئۇيغۇر Українська اردو Oʻzbekcha Tiếng Việt isiXhosa יידיש èdè Yorùbá 中文 isiZulu ubeko lwebhodi yezitshixo US English UK English US Dvorak Programmer Dvorak US Colemak US Workman Español Latino हिन्दी देवनागरी इन्स्क्रिप्ट العربية मराठी বাংলা ইনস্ক্রিপ্ট কিবোর্ড প্রভাত কিবোর্ড ইউনিজয় কিবোর্ড মুনির কিবোর্ড জাতীয় কীবোর্ড Português Brasileiro ABNT Русский Русский Диктор Deutsch Deutsch Schweiz Français Français du Canada Canadien Multilingue Français de Belgique Français de Suisse Français Bépo اُردُو‎ తెలుగు தமிழ் Tiếng Việt Telex Tiếng Việt VNI Tiếng Việt ਪੰਜਾਬੀ پنجابی ગુજરાતી Indonesia Melayu Jawa Türkçe Q Türkçe F Italiana فارسی แป้นพิมพ์เกษมณี แป้นพิมพ์ปัตตะโชติ Polski Filipino Hausa پښتو ಕನ್ನಡ മലയാളം Sunda ଓଡ଼ିଆ မြန်မာဘာသာ Українська Oʻzbekcha سنڌي Română Azərbaycanca Af-Soomaali Nederlands Belgische AZERTY Malagasy नेपाली සිංහල ភាសាខ្មែរ অসমীয়া Kiswahili Magyar Ελληνική Қазақша České Català Српски Srpski Svensk ພາສາລາວ Qhichwa Türkmençe Тоҷикӣ Български Български Фонетичен Shqip Afrikaans Հայերեն Татарча Монгол Hrvatski Dansk עברית Sesotho Slovenčina Suomi Norsk ქართული Кыргыз Беларуская Bosanski Lietuvių Galego Slovenščina Latviešu Македонски Башҡортса Eesti Euskara Cymraeg Malti 47 Malti 48 Frysk Lëtzebuergesch Icelandic Gaeilge Føroyskt Māori yezitshixo ▄▄ 104 ▄▄ 105 ▀█ ▄█
Ngaba le nto yenzelwe ikhululekile?
Kutheni ndifanele ndibhalise?
Ndingayifunda njani ngaphandle kwezaziso?
Ndingayinceda njani iphrojekthi yakho?
Kuthatha ixesha elingakanani ukufunda ukuthintela ukuthayipha?
Unokulinganisela njani umqondiso “amagama ngomzuzu” (WPM)?
Yintoni endiyidingayo ukuyisebenzisa iTypingStudy.com?
Xa ndiqala isifundo, le nkqubo ibonisa ukuba kufuneka ndicofe iqhosha leShift kunye neleta efunwe (i-ye-Shift letter). Kutheni kunjalo?
Ngaba iTypingStudy ifanelekile kubantu abane-dyslexia?
1) Ukuba ubhalisa, uya kuba nolwazi lwenkqubela phambili kunye nembali yenkqubela.
2) Unokufunda ngaphandle kwezentengiso ngokwenza umnikelo omncinci.
Emva komnikelo omncinci kwinqanaba lakho, siya kususa iintengiso ezivela kwiakhawunti yakho. Nceda ube nomonde, nangona kunjalo, kuba le nkqubo yenkqubo.
Unokukunceda nge- - 1) ukubhala izimvo malunga nento oyithandayo kwaye ungayithandiyo
2) ukubhala ngeengcinga zakho malunga nendlela yokuphucula amava okufunda (kunye nantoni na enye, ngokuqinisekileyo)
3) xelela abahlobo bakho ngathi (ukwabelana ngewebhusayithi yethu kumanethiwekhi omphakathi, ukujoyina kwi-https: //www.facebook.com/TouchTypingStudy)
Ubungakanani bexesha elifunekayo ukuze ufunde ukuchukumisa udidi oluxhomekeke kuwe. Kubalulekile ukuqhuba rhoqo. Ukufumana iziphumo ezilungileyo, sincoma ukuba wenze okungenani isifundo esinye ngosuku.
Khumbula, ukwazi apho zonke iileta zithethi akuthethi ukuba ulungele ukuthayipha okukhawulezayo. Iminwe yakho idinga ukuphucula imodeli yokuhamba eyimfuneko okanye into ebizwa ngokuthi “imemori yokunyakaza kwemisipha” apho ikhonkco nganye iqhosha likwazi ukuthayipha ngaphandle kokucinga ngezicwangciso okanye ukujonga ikhibhodi. Ukunyakaza okuzenzekelayo kuphuhliswa ngokuphindaphindiweyo. Khumbula - kuphela ukuqhuba kwenza okugqibeleleyo-akukho nto enye!
Ukulinganisa iWPM, inkqubo ibala ukuba mangaphi amagama owatyikitye ngomzuzu: 1 igama = iibali ezi-5, kubandakanywa izikhala kunye namanqaku okubhala.
Ukususela kwicala lobugcisa, udinga uxhumano lwe-Intanethi kuphela. Nangona kunjalo, uya kufuna kwakhona ukukhuthazwa kunye nokuzimisela ukusebenza ekuphuculeni izakhono zakho zokuthayipha.
Nceda uqinisekise ukuba iCaps Lock ayikho xa uqala ukuthayipha. Yilapho iCaps Lock ikhona ukuba le nkqubo ikucela ukuba ucinezele iqhosha leShift kunye neleta echaphazelekayo, kanyekanye.
TypingStudy kukuba wonke umntu ofuna ukuphuhlisa izakhono zakhe zokuthayipha. Ukuthayipha ukuthayipha yikhono elenza umntu afake ngaphandle kokujonga ikhibhodi ukuze afumane iifayile ezichanekileyo.
Ewe, ukuTyhulwa koTywala kufanelekile kubantu abane-dyslexia. Ngezakhono zokuthayipha, umntu onesifo se-dyslexia unenzuzo ekhethekileyo phezu komntu ongenazo izakhono zokuthayipha. (Njengoko abanye abantu abane-dyslexia banenkathazo ngombhalo obhaliweyo, umbhalo ochwephelwayo uya kubanceda kakhulu, ukususela kwisibini isivinini nokujonga ukufunda.) Kakade, kunceda kakhulu ukuba ube nekhompyuter kwikhompyutha, kuba ke umntu unokukwazi ukuhlola !
Akuvumelekanga © 2009 - 2021, www.typingstudy.com